Burburka Dhaqaalle Burco | Qaran News
Burburka Dhaqaalle Burco
Writen by Qaran News | 10:16 pm 9th Feb, 2019
Meel loo hiiliyo waxa ugu abaal daran Burco. Hore ayaan Anigu ugu khasaaray marar aan qalin iyo af ugu sameeyey hiil. Xalay ayaa ugu dambaysay oo markii Xog. Khadar iftiimiyey dhaqaalle-ahaan heerka togdheer ay ka hadhay goboladda galbeedka, wax afka iskaga duubay Xil. Obama! Obama waxa uu lasoo booday. ‘Laamiga Ceeri iyo isku xidha Togdheer’ oo uu ku sheegay in uu yahay mashruucii ugu balaadhnaa ee abid laga hirgaliyo JSL.
Burco waa magaalo hagaastay! 1990kii waxa lagu murmi jiray, Burco waa magaalada sadexaad ee Soomaaliya, maanta Burco kuma jirto 6da magaalo ee ugu dadka badan Ex-Somalia. Waxa ayna 18kii magaallo caasimadeed ee Soomaalia, dhaqaalle ahaan ka galaysaa kaalinta 17aad ama 18aad! Maxaa sababay burburka Burco.
Burco waxa ay gashay gafkii ugu waynaa 1991kii markii si bilaa shuruud ah, Hargaysa ay la qaadatay in ay wada dhistaan dawlad la yidhaa Somaliland. 1991kii baloodhka ku yaala Laba-qaw – Burco, waxa uu ka qaalisanaa degmadda koodbuur oo la isku daray, maanta dhulka uu ku yaalo dugsiga Sh. Bashiir – Hargaysa, ayaa ka qiimo badan Burco oo la isku wada daray badhkeed.
Heshiiskii Burco waxa uu ahaa heshiis indho la’aan ah oo ay ka faa’idaystay xaafaddo ka middi Hargaysi. Hargaysa ayaa 30kii sanno ee midawga iyadu lumisay qiimihii caasimadnimo, Hargaysa waxa ay Ingiriiska ka heli jirtay dhacdhac dhaqaalle iyo shaqa-abuur maamul oo wakhtigii maxmiyadda ay Hargaysi door libaax ka heli jirtay. Waana sababta ugu wayn ee ay Herer u diiday midnimadii Soomaalia.
Gabood-falka ugu culus ee Togdheer loo gaystay ayaa dhacay 1998. Sanadkaa waxa albaabadda loo xidhay suuqii ugu waynaa ee ka furnaa togdheer – Yiroowe.
2014kii ayaa ay ahayd wakhtigaasi waana markii aan hellay jawaabta su’aashii maskaxdayda ka guuxaysay 16ka sano. Maxaa sababay hoos-u-dhaca dhaqaalle ee Togdheer? Hargaysa waxa ay galisay Burco godoomin la mida ta lagu hayo marinka QAZA. Burco iyo Qaza waxa marar badan xoriyad badan Qaza.
1960kii Markii lagu biirayey Konfurta Soomaaliya, waxa jiray siyaasi u dhashay Burco oo ku dooday “Intii inanta togdheer ay Hargaysa marti ku noqon lahayd, inanta waqooyi marti haku noqoto Xamar”. Aragtidaas waa mid xaqiiqadeedii muuqato maanta sababta oo ah, qaybo ka tirsan Hargaysi ma ogolo dadka kale in ay madaxa la kacaan.